Isikhungo Sokugcinwa Kwenkululeko Yomthengi - Ilungelo Lase-US Lokwazi
Ukunxenxa ama-pesticides nama-GMOs eHawaii
Ukuphakamisa amaqembu angaphambili nezithunywa ezingathembekile
IHawaii Alliance yezithunywa zeSayensi
ICornell Alliance yabasebenzi beSayensi, abeluleki
IGates Foundation: ukuhlaziywa kwamasu wokuthuthukisa ezolimo
Imibhalo Eyimfihlo Idalula Impi kaMonsanto Ngososayensi Bomdlavuza
Posted on October 1, 2018 by UStacy Malkan
NguStacy Malkan (kubuyekezwe ngoMeyi 17, 2019)
UDeWayne Johnson, ubaba oneminyaka engama-46 obulawa yi-non-Hodgkin lymphoma, waba ngumuntu wokuqala ukubhekana IMonsanto ecaleni ngoJuni odlule ngenxa yezinsolo inkampani yafihla ubufakazi ngezingozi ezibangelwa umdlavuza ze-Roundup weedkiller yayo. Amajaji aselokhu abuya nawo ezintathu ngazwi linye izinqumo ukuthola ukuthi i-glyphosate-based Roundup herbicides iyimbangela enkulu yomdlavuza, futhi yalinganisa umonakalo omkhulu wokujeziswa kweBayer (manje esingeyaseMonsanto). Izinkulungwane eziningi zabantu zimangalele izinkantolo zombuso nezikahulumeni, kanye nemibhalo yezinkampani ephuma ezivivinyweni ikhanya kakhulu kumaqhinga anzima iMonsanto esetshenziselwa ukuphika ingozi yomdlavuza nokuvikela ikhemikhali elaliyi lynchpin yenzuzo yayo.
“IMonsanto kwakungumbhali waso wesipoki ngokubuyekezwa kokuphepha, ”kubika iBloomberg, kanye nesikhulu se-EPA kubikwa ukuthi wasiza uMonsanto “Bulala” ucwaningo lomdlavuza lwenye i-ejensi (lokho kuphuma, manje kuphelile qinisekisa isixhumanisi somdlavuza ku-glyphosate). An uphenyo olwawina imiklomelo eLe Monde Imininingwane yokuthi uMonsanto uzame kanjani “ukubhubhisa i-ejensi yomdlavuza yeZizwe Ezihlangene nganoma iyiphi indlela” ukusindisa i-glyphosate. Izindatshana zeJenali ezisuselwa ekubukezweni kombiko wemibhalo yokutholwa kwesilingo seRoundup ukuphazamiseka kwebhizinisi encwadini yesayensi kanye nenhlangano elawula umthetho, nezinye iziboneloukufaka ubuthi emthonjeni wesayensi. "
“Ukubhalwa kwesipoki kukaMonsanto nokuqinisa izikhali kusongela isayensi yomsindo nomphakathi, "Kubhala uSolwazi waseTufts University uSheldon Krimsky ngoJuni 2018. Uthe imibhalo etholakele," yembula ukuthunjwa kwesayensi okuyinkampani, okubeka impilo yomphakathi kanye nesisekelo sentando yeningi engcupheni. "
Kusukela lapho, njengoba sekuqhubeka izivivinyo, sekuvele eminye imibhalo mayelana ne ubukhulu bokukhohlisa kukaMonsanto kwenqubo yesayensi, izinhlaka zokulawula, nezimpikiswano zomphakathi. NgoMeyi 2019, izintatheli eFrance uthole imfihlo "Ifayela leMonsanto" eyenziwe yinkampani yezobudlelwano bomphakathi iFleishmanHillard ibala "inqwaba yolwazi" cishe izintatheli ezingama-200, osopolitiki, ososayensi nabanye ababonakala bengaba nomthelela empikiswaneni ye-glyphosate eFrance. Abashushisi eFrance bavule uphenyo lobugebengu futhi IBayer ithe iphenya inkampani yayo i-PR.
Le mpi yenkampani yesayensi inomthelela omkhulu kithi sonke, uma kubhekwa ukuthi uhhafu wabo bonke abesilisa e-US kanye nowesithathu kwabesifazane bazotholakala benomdlavuza esikhathini esithile sokuphila kwethu, ngokusho kwe I-National Cancer Institute.
Imibhalo imboni yokudla ayifuni ukuthi uyibone
Sekuyiminyaka, izimboni zokudla nezamakhemikhali zibheke ngqo kokuhlosiwe okukodwa emhlabeni wesayensi: i-International Agency for Research on Cancer (IARC), iqembu elizimele locwaningo elisebenze iminyaka engama-50 khomba izingozi zomdlavuza ukwazisa izinqubomgomo ezingavimbela umdlavuza.
“Kade ngilwa i-IARC unomphela !!! :) ”omunye usosayensi owayenguKraft Foods wabhalela owayengusosayensi waseSyngenta ku-imeyili itholwe ngesicelo samarekhodi esivulekile sombuso. “Ukudla ne-ag sekuvinjezelwe kusukela eGlyphosate ngoMashi 2015. Sonke kudingeka sihlangane ngandlela-thile siveze i-IARC, njengoba nina nenze ephepheni. Izinto eziza kuqala kakhulu yizo zonke izithako zokudla: i-aspartame, i-sucralose, i-iron yokudla, i-B-carotene, i-BPA, njll. I-IARC iyasibulala! ”
Isazi se-IARC isinqumo sephaneli ukuhlukanisa i-glyphosate ngokuthi “mhlawumbe ibanga umdlavuza kubantu” kudale indawo yokuhlangana yezitha zephaneli ukuqoqa amabutho. Umbhalo osemqoka weMonsanto okhishwe ngamacala wecala wembula uhlelo lokuhlaselwa: ihlazisa ososayensi abanomdlavuza ngosizo lwabalingani embonini yezokudla.
Uhlelo lukaMonsanto lokuxhumana nomphakathi unikeze abasebenzi abangu-20 bezinkampani ukulungiselela umbiko we-IARC we-carcinogenicity on glyphosate, ngezinhloso ezibandakanya "ukunciphisa umthelela," "ukubeka umbono womphakathi nge-IARC," "ukufinyelela komlawuli," "ukuqinisekisa i-MON POV" kanye "nokubandakanya izinhlangano zezimboni" "ekuthukutheleni. ”
Lo mbhalo ukhombe izigaba ezine "zabalingani bemboni" ukusiza ukuqhubekisela phambili izinhloso ezintathu ezishiwo ohlelweni lwe-PR: ukuvikela isithunzi se-Roundup, ukuvimbela izimangalo zomdlavuza "ezingenasisekelo" ekubeni umbono ovamile, kanye "nokuhlinzeka ngezembozo ezinhlanganweni ezilawulayo" ukuqhubeka nokuvumela ukusetshenziswa kwe-glyphosate.
Ukuthola inethiwekhi kaMonsanto "yabalingani bemboni"
The amaqembu abalingani bemboni uMonsanto uthephiwe ukwehlisa isithunzi ososayensi be-IARC babandakanya izinhlangano ezinkulu zokubulala izinambuzane kanye nezimboni zokudla; amaqembu e-spin axhaswa ngezimboni aziveza njengemithombo ezimele efana Izimpendulo ze-GMO futhi Umkhandlu Wemininingwane Yomhlaba Wokudla; futhi "isayensi-y" kuzwakala amaqembu angaphambili afana Umuzwa weSayensi, lo Iphrojekthi ye-genetic Literacy Project futhi Ukubuyekezwa Kwezifundiswa - konke kusetshenziswa imilayezo efanayo futhi kuvame ukubhekiswa komunye nomunye njengemithombo.
Amadokhumenti atholiwe yi-US Right kuya Yazi uphenyo khanyisa ukuthi la maqembu abalingani asebenzisana kanjani ukukhuthaza i- "MON POV" mayelana nokuphepha kanye nesidingo semithi yokubulala izinambuzane kanye nama-GMO.
Iqoqo elilodwa lemibhalo lembula ukuthi izinkampani zikaMonsanto ze-PR zahlela kanjani “Ukubuyekezwa Kwezemfundo” njengenkundla ezwakala ingathathi hlangothi lapho ingaqala khona ukuhlaselwa uhlu lwezitha, kufaka phakathi iSierra Club, umbhali uMichael Pollan, i-movie ethi Food, Inc. kanye ne- imboni yemvelo.
Abakhi bokubukeza kwezifundo - ababambisene nabo UBruce Chassy futhi UDavid Tribe, Isikhulu seMonsanto u-Eric Sachs, owayengumqondisi wezokuxhumana eMonsanto uJay Byrne, Futhi owayeyi-VP weqembu lokuhweba lomkhakha we-biotech iVal Giddings - wakhuluma obala in ama-imeyili maqondana nokusungula ukubuyekeza kwe-Academics njengeqembu eliphambili lokukhuthaza izintshisekelo zemboni nokuheha imali yemboni, ngenkathi kugcinwa izigxivizo zeminwe zenkampani zifihliwe.
I-imeyili evela ku-Eric Sachs, iMonsanto'sScience, Technology & Outreach Lead, iya kuBruce Chassy
Ngisho namanje ngebhuku labo lokudlala lidaluliwe - kanye nelabo imali eyisisekelo ikhonjisiwe njengoba ivela eqenjini lezentengiselwano elixhaswe ngabakwaMonsanto, iBayer, iBASF, iSyngenta neDowDuPont - i-Academics Review isafuna lokho iwebhusayithi ukwamukela iminikelo evela “emithonjeni okungeyona eyezinkampani” Ukubuyekezwa kwe-Academics kubuye kuthiwe "Ukubuyekezwa komdlavuza we-IARC glyphosate kwehluleka ezingxenyeni eziningi," ku okuthunyelwe itholwe yiwebhusayithi ye-PR exhaswa yimboni Izimpendulo ze-GMO, iqembu eliphambili elixhaswe yimboni Umkhandlu waseMelika weSayensi nezeMpilo, kanye nendatshana yeForbes ngu Henry Miller lokho kwabhalwa isipoki nguMonsanto.
UMiller nabahleli be-Academics Review Chassy, ​​Tribe, Byrne, Sachs and Giddings are amalungu e-AgBioChatter, isithangami se-imeyili sangasese esivele ohlelweni lweMonsanto lwe-PR njengomlingani womkhakha wesi-2. Ama-imeyili avela kuhlu lwe-AgBioChatter ziphakamisa ukuthi yayisetshenziselwa ukuxhumanisa ababambisene nabo embonini emisebenzini yokunxenxa neyokuphromotha ukuvikela ama-GMO kanye nezibulala-zinambuzane. Amalungu afaka abasebenzi abaphezulu embonini yezolimo, abeluleki be-PR kanye nezifundiswa ezixhasa umkhakha, iningi labo elibhalela izinkundla zezindaba zomkhakha ezifana Izimpendulo ze-GMO futhi Iphrojekthi ye-genetic Literacy Project, noma badlale izindima zobuholi kwamanye amaqembu abalingani beMonsanto.
I-Genetic Literacy Project, eholwa ngumkhakha osebenza isikhathi eside wamakhemikhali i-PR UJon Entine, futhi ibambisene ne-Academics Review ukwenza uchungechunge lwezingqungquthela ezixhaswe imboni yezolimo ukuqeqesha izintatheli nososayensi ukuthi ukukhuthaza kangcono ama-GMO kanye ne-pesticides baphikisane nokwehliswa kwabo emthethweni. Abahleli bebekhona abangathembeki ngemithombo yezimali zabo.
Lawa maqembu aziphonsa njengabaxazululi abathembekile besayensi njengoba besabalalisa imininingwane engamanga nezinga eliseduze nokuhlaselwa okushubile kwabososayensi abaphakamise ukukhathazeka ngengozi yomdlavuza ye-glyphosate.
Isibonelo esisemqoka singatholakala kuwebhusayithi ye-Genetic Literacy Project, ebibhalwe ukuthi “yi-tier 2 industry partner” ohlelweni lukaMonsanto lwe-PR lokuvikela i-Roundup ekulweni nokukhathazeka komdlavuza okuvezwe yi-International Agency for Research on Cancer. Ukuseshwa kwe- "IARC" kuwebhusayithi ye-Genetic Literacy Project kuveza izindatshana ezingaphezu kwama-200, eziningi zazo ezihlasela ososayensi abaphakamise ukukhathazeka ngomdlavuza ngokuthi "ama-anti-chemical enviros" "aqamba amanga" futhi "enza uzungu lokumelela kabi" izingozi zempilo glyphosate, futhi bephikisana nokuthi i-ejensi yomdlavuza yomhlaba wonke kufanele ibuyiselwe imali futhi iqedwe.
Izindatshana eziningi ezilwa ne-IARC ezifakwe ku-Genetic Literacy Project, noma eziqhutshwa abanye abasebenza embonini, ziyishaya indiva imibiko eminingi yezindaba ngokususelwa Amaphepha eMonsanto ukubhala ukungenelela kwezinkampani ocwaningweni lwesayensi, futhi esikhundleni salokho kuthuthukiswe izimangalo zezimboni zamakhemikhali ze-PR noma ze- izindaba ezingamanga a intatheli enobudlelwano obuhle noMonsanto. Impi yezepolitiki yokulwa ifinyelele yonke indlela eya eCapitol Hill, namaRiphabhulikhi e-DRM aholwa ngu Ummeli uLamar Smith efuna kuphenywe nokuzama uku ukugodla imali yase-US kusuka kunhlangano ehamba phambili yocwaningo lomdlavuza.
Ngubani ohlangothini lwesayensi?
Ukunxenxa nokuthumela imiyalezo kukaMonsanto ukudicilela phansi iphaneli yomdlavuza we-IARC kusekelwe empikiswaneni yokuthi ezinye izinhlaka ezisebenzisa ukuhlolwa okususelwa engcupheni zikhiphe i-glyphosate engcupheni yomdlavuza. Kepha njengoba imibiko yophenyo futhi iphephandaba izihloko ngokusekelwe ku Amaphepha eMonsanto bunemininingwane eminingi, ubufakazi bufaka ukuthi ukuhlolwa kokulawulwa kwezinhlekelele ku-glyphosate, okuthembele kakhulu ocwaningweni olunikezwa yimboni, kuyekethiswa ngokungadalulwanga ukungqubuzana kwezintshisekelo, ukuthembela kusayensi engabazisayo, izinto ezibhalwe ghost nezinye izindlela zokuqinisa izikhali ezinkampanini ezibeka impilo yomphakathi engcupheni, njengoProfesa waseTufts USheldon Krimsky wabhala.
“Ukuvikela ibhizinisi lesayensi, enye yezinsika zomphakathi wentando yeningi wanamuhla, ekulweni namandla angalenza isisebenzi sezimboni noma ezepolitiki, umphakathi wethu kumele usekele izikhubekiso phakathi kwesayensi yezemfundo kanye nemikhakha yezinkampani futhi ufundise ososayensi abasha futhi abahleli bephephabhuku ngemigomo yokuziphatha esezingeni lomsebenzi wabo, ”kubhala uKrimsky.
Abenzi benqubomgomo akumele bavumele isayensi ebumbene nenkampani ukuqondisa izinqumo mayelana nokuvinjelwa umdlavuza. Abezindaba kumele benze umbiko ongcono womsebenzi futhi babheke izingxabano zentshisekelo ngemuva kwesayensi yenkampani. Isikhathi sokuqeda impi yenkampani yesayensi yomdlavuza.
UStacy Malkan ungomunye wabaphathi beqembu labathengi I-US Ilungelo Lokwazi nombhali wencwadi ethi “Not Just a Pretty Face: The Ugly Side of the Beauty Industry.”
Ukudla Okucatshangwayo, Uphenyo lwethu, izibulala-zinambuzane Ukubuyekezwa Kwezifundiswa, ACSH, Izifundiswa ze-AgBioChatter, Umkhandlu waseMelika weSayensi nezeMpilo, BASF, Bayer AG, Bio, UBruce Chassy, ososayensi bomdlavuza, I-CBI, Isikhungo Senkululeko Yabathengi, CLI, CropLife Melika, ICropLife International, UDavid Tribe, UDeWayne Johnson, DowDuPont, U-Eric Sachs, FOIA, Iphrojekthi ye-genetic Literacy Project, Izimpendulo ze-GMO, Inhlangano Yabenzi Begilosa, gyphosate, Henry Miller, IARC, IFIC, Umkhandlu Wokwaziswa Kwezokudla Womhlaba Wonke, UJay Byrne, UJerry Steiner, UJon Entine, UKate Kelland, Ukudla Kraft, Lamar Smith, Monsanto, Amaphepha eMonsanto, RoundUp, Isayensi Media Center, Umuzwa Ngezesayensi, Syngenta, I-Val Giddings, impi nomdlavuza
Izigxivizo zeminwe zikaMonsanto Kuzo Zonke I-Newsweek's Hit on Organic Food
Posted on January 23, 2018 by UStacy Malkan
buyekeza: Impendulo eyinqaba yeNewsweek
"Umkhankaso wokudla okuphilayo ngumkhonyovu okhohlisayo, obizayo," ngokusho komhlaka-19 Januwari Newsweek esihlokweni ebhalwe nguDkt.Henry I. Miller weSikhungo seHoover.
Uma lelo gama lizwakala lijwayelekile - uHenry I. Miller - kungahle kube ngoba New York Times muva iveze ihlazo okubandakanya uMiller: ukuthi ubanjwe eshicilela i-athikili ebhalwe ghost nguMonsanto ngaphansi kwegama lakhe ku Forbes. I-athikili, ebikhombisa kakhulu uhlaka olunikezwe uMonsanto, ihlasele ososayensi bephaneli lomdlavuza le-World Health Organisation (IARC) labo isinqumo sokufaka ohlwini Amakhemikhali athengisa kakhulu kaMonsanto, i-glyphosate, njenge-carcinogen yabantu.
Ukubika ku ukushintshana nge-imeyili ekhishwe ngamacala neMonsanto mayelana nokukhathazeka komdlavuza, i- Izikhathi ' UDanny Hakim wabhala:
"UMonsanto ubuze uMnu. Miller ukuthi angathanda yini ukubhala indatshana ngalesi sihloko, futhi wathi, 'Ngingathanda uma ngingaqala kusuka embhalweni osezingeni eliphezulu.'
Lo mbhalo uvele ngaphansi kwegama likaMnu. Miller, nangokuthi 'imibono evezwe ngabakwa-Forbes Contributors ingeyabo.' Lo magazini awuzange ukhulume ngokubandakanyeka kukaMonsanto ekulungiseleleni lo mbhalo…
UForbes ususe lolu daba kwi-webhusayithi yakhe ngoLwesithathu wathi buqedile ubudlelwano bakhe noMnuz Miller phakathi kokudaluliwe. ”
Intambo yombono Iphrojekthi Syndicate kwalandela okufanayo, ngemuva kokuqala ukufaka isimangalo kumazwana kaMiller lapho aqaphela ukuthi ayezokwaliwa uma ukusebenzisana kwakhe noMonsanto kwakwaziwa.
Ithemba Lokwehlisa I-Organic
Ihlazo lokubhala ngezipoki alikaze limnciphise uMiller; uqhubekile nokuhlunga okuqukethwe okwenyuswayo embonini yezolimo kusuka ezitolo ezinjenge Newsweek futhi The Wall Street Journal, ngaphandle kokudalula kubafundi ubuhlobo bakhe neMonsanto.
Noma kunjalo kaMiller Newsweek Ukudla okune-organic kunezigxivizo zeminwe zikaMonsanto ngokusobala kuyo yonke indawo.
Okokuqala, uMiller usebenzisa imithombo yomkhakha wezibulala-zinambuzane ukwenza izimangalo ezingenabufakazi (nezindidayo) mayelana nezolimo eziphilayo - ngokwesibonelo, ukuthi ukulima ngokwemvelo "empeleni kuyingozi kakhulu emvelweni" kunokulima okuvamile, noma ukuthi ababambisene nabo bachitha u- $ 2.5 billion ngonyaka bekhankasa ngokumelene nokudla okwenziwe ngezakhi zofuzo eNyakatho Melika.
Umthombo kulesi simangalo esingalungile nguJay Byrne, owayengumqondisi wezokuxhumana kwezinkampani eMonsanto (ongaziwa kanjalo kwi Newsweek athikili), manje oqondisa inkampani ye-PR ebizwa nge-v-Fluence Interactive.
Ukuhwebelana nge-imeyili kuveza ukuthi iMonsanto isebenza kanjani nabantu abanjengoJay Byrne - kanye noByrne ngqo - ukusunduza lolu hlobo lokuhlaselwa kwezitha zikaMonsanto ngenkathi kugcinwa ukubandakanyeka kwenkampani kuyimfihlo.
Ngokwama-imeyili atholwe iqembu lami Ilungelo le-US Lokwazi, U-Byrne wadlala indima enkulu ekusizeni iMonsanto ukuba isungule iqembu eliphambili lenkampani elibizwa nge-Academics Review elashicilela umbiko ohlasela imboni yezimboni njengomkhonyovu wokumaketha - okuyisihloko ngqo kuMiller's Newsweek isihloko.
Uhlu lukaJay Byrne lwezitha zaseMonsanto.
Umqondo weqembu langaphambili - kuchazwe ku- ama-imeyili engiwabike lapha - bekuzokwakha ipulatifomu enomsindo othembekile lapho izifundiswa zingahlasela abagxeki bemboni yezolimo ngenkathi bethi zizimele, kepha zithola imali ngasese emaqenjini ezimboni. Ukucwayiza, ukucwayiza, ha, ha.
"Ukhiye kuzogcina iMonsanto ingemuva ukuze ingalimazi ukwethembeka kolwazi," kubhale umphathi weMonsanto ohilelekile ohlelweni.
Indima kaByrne, ngokusho kwama-imeyili, ibizosebenza njenge "moto yokuhweba" ukusiza ukuthola imali yenkampani. U-Byrne uphinde wathi uhlanganisa uhlu “lwamathuba” okuhlosiwe - abagxeka imboni yezolimo okungenzeka ukuthi "bafakwe umjovo" endaweni yesikhulumi sabafundi.
Abantu abaningana kuhlu lwamathuba ka-Byrne, noma kamuva bahlaselwa yi-Academics Review, babeyizisulu ku-Miller's Newsweek isihloko, futhi.
IMiller's Newsweek ucezu naye uzame ukudicilela phansi umsebenzi we New York Times ' intatheli uDanny Hakim, ngaphandle kokudalula ukuthi kwakunguHakim owadalula ihlazo likaMiller lokubhala ngesipoki likaMiller.
Njengakamuva nje ukuhlaselwa kwemboni yemvelo, yonke iminwe ikhomba emuva ezinkampanini zezolimo ezizolahlekelwa kakhulu uma isidingo sabathengi siqhubeka nokukhuphuka kokudla okungenawo ama-GMO kanye nezibulala-zinambuzane.
Ukusetshenziswa KukaMonsanto “Okuzimele Kwezemfundo”
UHenry Miller une- umlando omude wokusebenzisana no - no ebeka izinsizakalo zakhe ze-PR - izinkampani ezidinga usizo lokukholisa umphakathi ukuthi imikhiqizo yazo ayiyona ingozi futhi ayidingi ukulawulwa.
Futhi iMonsanto incike kakhulu kubantu abaneziqinisekiso zesayensi noma amaqembu azwakala engathathi hlangothi ukwenza lezo zingxabano - abantu abazimisele ukuxhumana nombhalo wenkampani ngenkathi bethi bangabalingisi abazimele. Leli qiniso lisungulwe ngokubika ku New York Times, Okwezwe, WBEZ, lo Ukuqhubeka phambili futhi ezinye izindawo eziningi eminyakeni yakamuva.
Idokhumenti esanda kukhishwa yeMonsanto inikeza imininingwane eyengeziwe mayelana nokuthi inkulumo-ze kaMonsanto nokusebenza kokunxenxa kusebenza kanjani, kanye nendima esemqoka edlalwa nguHenry Miller kuyo.
Lo 2015 “uhlelo lokulungiselela”- ekhishwe abameli ezinkantolo zomdlavuza i-glyphosate - ibeka isu likaMonsanto le-PR" lokuhlela ukukhala "ngokumelene nososayensi bomdlavuza we-IARC ngombiko wabo we-glyphosate. Owokuqala ongakhishwa: "Bandakanya uHenry Miller."
Uhlelo luzoqhubeka lunezigaba ezine "zabalingani bemboni" - amaqembu ezokuhweba ayishumi nambili, amaqembu ezemfundo kanye namaqembu aphambili abonakala ezimele afana ne Iphrojekthi ye-genetic Literacy Project - lokho kungasiza "ukugoma" ngokumelene nombiko womdlavuza futhi "kuvikele isithunzi… se-Roundup."
UMiller uhambisele iMonsanto ngoMashi 2015 esihlokweni eForbes - lo mbhalo kamuva wembula njengombhalo kaMonsanto - uhlasela ososayensi be-IARC. Ozakwethu bezimboni bebelokhu bephusha izimpikiswano ezifanayo ngemigudu ehlukahlukene kaninginingi, selokhu, ukuzama ukudicilela phansi ososayensi bomdlavuza.
Okuningi kwalokhu kugxeka kubonakale emphakathini njengokuvukela okuzenzekelayo kokukhathazeka, kungakhulunywa ngeqhaza likaMonsanto njengomqambi nomqhubi womlando: i-hoodwink yenkampani yakudala.
Njengoba eminye imibhalo ingena embusweni womphakathi - nge Amaphepha eMonsanto futhi uphenyo lwamarekhodi womphakathi - iqhinga "lokufunda elizimele" kuzoba nzima ukuligcinela abasebenza embonini njengoHenry I. Miller, kanye nabezindaba nabenzi benqubomgomo abangayinaki.
Okwamanje, Newsweek ayihlehli. Ngisho nangemva kokubuyekeza imibhalo eqinisekisa amaqiniso akule ndatshana, Newsweek Umhleli wemibono uNicholas Wapshott ubhale ku-imeyili ukuthi, “Ngiyakuqonda ukuthi wena noMiller ninomlando omude wokuphikisana ngalesi sihloko. Ukuphika ngokusobala okuqinisekisile. ”
UMiller noWapshott abaphendulanga eminye imibuzo.
UStacy Malkan ungomunye wabaphathi beqembu elibheka abathengi nelisebenza obala, i-US Right to Know. Ungumbhali wencwadi ethi, “Not Just a Pretty Face: The Ugly Side of the Beauty Industry” (New Society, 2007). Ukudalulwa: I-US Right to Know ixhaswe ngokwengxenye yi-Organic Consumers Association eshiwo ku-athikili kaMiller futhi evela kuhlu olushaywayo lukaByrne.
Uphenyo lwethu, izibulala-zinambuzane Ukubuyekezwa Kwezifundiswa, I-American Beverage Association, I-American Chemistry Council, Umkhandlu waseMelika weSayensi nezeMpilo, I-American Statistical Association, Ugwayi waseMelika waseBrithani, Burson-Marsteller, Cato Institute, Isikhungo Senkululeko Yabathengi, Isikhungo Sezindaba Nezindaba Zomphakathi, UCharles Koch, Coca-Cola, Isikhungo Sokuncintisana Samabhizinisi, ICornell Alliance yeSayensi, Inhlangano Yezokuhweba Yezimboni Yezimonyo, UDanny Hakim, UDavid Murray, UDick Taverne, Abaxhasi Trust, AmaGates Foundation, Iphrojekthi ye-genetic Literacy Project, UGeorge Mason University, IGeorge Mason University Foundation, I-Global Energy Balance Network, glyphosate, UHeather Dahl, UHenry I. Miller, Isikhungo seHoover, Isikhungo saseHudson, IARC, Isikhungo Semibono, Inhlangano Yomhlaba Yamanzi Amabhodlela, Umkhandlu Wokwaziswa Kwezokudla Womhlaba Wonke, I-International Sweeteners Association, UJay Byrne, UJoel Schwartz, UJohn Entine, Isisekelo sikaJohn M. Olin, UKimberly Dennis, Ama-Koch Industries, Ukuphila kweMarxism, Umagazini we-LM, Monsanto, INational Press Foundation, Newsweek, UNicholas Wapshott, INorth American Metal Packaging Alliance, Qeda, Phillip Morris, I-Plastics Industry Trade Association, I-PRIMA Yurophu, URebecca Goldin, Iqembu Lezinguquko LamaKhomanisi, URona Applebaum, URobert Lichter, Isikhungo Sasebukhosini, ISarah Scaife Foundation, Isayensi Media Center, ISearle Freedom Trust, Isikhungo Sokucwaninga Sezenhlalo, I-Spiked Magazine, Isevisi Yokuhlola Izibalo, IZIBALO, USteven Blair, UVic Han
Izigxivizo zeminwe zeMonsanto Zithole Konke Ukuhlaselwa Kokudla Okuphilayo
Posted on July 1, 2016 by UStacy Malkan
Le ndatshana ivele okokuqala ku- Huffington Post.
Lapho inhlangano engenzi nzuzo enedumela elihle ikhipha umbiko ohlasela imboni yokudla yemvelo ngo-Ephreli 2014, leli qembu lenza konke okusemandleni alo ukuzimela.
Ikhasi le-30 umbiko by Ukubuyekezwa Kwezifundiswa, echazwe “njengengenzi nzuzo eholwa ochwepheshe abazimele bezemfundo kwezolimo nakwezesayensi yokudla,” yathola ukuthi abathengi babekhohliswa ukuba basebenzise imali ethe xaxa yokudla okuphilayo ngenxa yemikhuba yokukhangisa ekhohlisayo eyenziwa imboni yezinto eziphilayo.
Izihloko ezisematheni ezentengiselwano zababaza: “Okungokwemvelo kuveziwe!” (Izindaba zeBrownfield) nokuthi “Imboni Engokwemvelo Iyakhula Ngabathengi Abakhohlisayo” (Izindaba Zokuphepha Kokudla), bethi okutholakele ngochwepheshe abazimele.
Lokhu okutholwe “kuvunyelwe yithimba lamazwe omhlaba lesayensi ezimele yezolimo, isayensi yokudla, ongoti bezomnotho nabezomthetho abavela ezikhungweni zomhlaba ezihlonishwayo,” ngokusho kweqembu isitatimende sephephandaba.
Uma ngabe iphuzu mayelana nenkululeko belingacacanga, ukukhishwa kwabezindaba kugcina ngalokhu: “Ukubuyekezwa kwezifundiswa akunakho ukungqubuzana kwezintshisekelo okuhlobene nalolu shicilelo, nazo zonke izindleko ezihambisanayo ezikhokhelwe ukusebenzisa izimali zethu jikelele ngaphandle kokucaciswa okuthile ithonya noma isiqondiso somnikeli. ”
Okungazange kushiwo embikweni, ukukhishwa kwezindaba noma kuwebhusayithi: Abaphathi beMonsanto Co, umkhokheli ohola phambili emhlabeni wezolimo kanye nembewu eyenziwe ngezakhi zofuzo, kanye nabalingani abakhulu beMonsanto, ababambe iqhaza ekuqoqeni isikhwama se-Academics Review, babambisana namasu waze waxoxa nangezinhlelo zokufihla uxhaso lwezimboni, ngokusho kwama-imeyili etholwe yi-US Right to Know ngezicelo zombuso ze-Freedom of Information Act (FOIA).
Izinhloso zikaMonsanto ekuhlaseleni imboni yezinto eziphilayo zisobala: Imbewu namakhemikhali kaMonsanto anqatshelwe ukusetshenziswa kwezolimo, futhi ingxenye enkulu yemiyalezo kaMonsanto ukuthi imikhiqizo yayo iphakeme kunokwemvelo njengamathuluzi okukhulisa ukukhiqizwa kokudla komhlaba wonke.
Izifundiswa Phatha Umyalezo kaMonsanto
I-Academics Review yasungulwa ngokubambisana "ngoprofesa ababili abazimele… emaphethelweni ohlangothi lweplanethi," uBruce Chassy, ​​Ph.D., uprofesa osafufusa e-University of Illinois, noDavid Tribe, Ph.D., umfundisi omkhulu e-University of Melbourne . Bona Faka isicelo iqembu "lamukela kuphela iminikelo engavinjelwe emithonjeni engeyona eyezinkampani."
Kodwa-ke ukuhwebelana ngama-imeyili okubili ngo-2010 kuveza izinhlelo zokuthola uxhaso lwezinkampani lwe-Academics Review ngenkathi kugcinwa iminwe yenkampani ifihliwe.
Ngo-Mashi 11, 2010 ukushintshana nge-imeyili noChassy, ​​uJay Byrne, owayeyinhloko yezokuxhumana eMonsanto manje osephethe i- I-PR kanye nefemu yocwaningo lwemakethe, wanikela ngokusebenza "njengemoto yezentengiso" ukusiza ukuthola uxhaso lwezinkampani lwe-Academics Review.
UChassy uxoxe ngentshisekelo yakhe yokuhlasela imboni ephilayo kuma-imeyili. "Ngingathanda ukuba negama eliphakeme phakathi kwe-aura engokwemvelo lapho ngizokwethula khona imicibisholo ye-ballistic…" ubhale wathi, "Ngiqinisekile anginayo imali."
U-Byrne uphendule wathi,
“Yebo, ngiphakamisa ukuthi sisebenzele imali (yethu sonke) kuqala futhi ngokushesha! Ngiphakamise uVal [Giddings, owayeyisekela likamongameli we-BIO, inhlangano yokuhweba embonini ye-biotech] ukuthi mina naye sihlangane ngenkathi ngise-DC ngesonto elizayo ukuze sikwazi (hhayi nge-imeyili) ukuthola isithombe esicacile sezinketho ngokuyisa iphrojekthi ye-Academic Review namanye amathuba. "Isikhungo Sokukhululeka Kwabathengi" (ActivistCash.com) singene ngalokhu ngokweqile. "
ICentre for Consumer Freedom iqondiswa nguRick Berman, ilobbyist obizwe “UDkt Evil"Futhi"inkosi yamaqembu angaphambili ezinkampani kanye nenkulumo-ze“Ngomsebenzi wakhe wokuqhakambisa imboni kagwayi nezinye izinto ezibandakanyeka ezinkampanini ngaphansi kwamaqembu angachemile.
"Ngicabanga ukuthi sinomqondo ongcono kakhulu," kusho uByrne etshela uChassy.
U-Byrne wabelana ngohlu lwamathuba ahlosiwe ngabantu, amaqembu kanye nokuqukethwe okugxeka ama-GMO kanye neMonsanto: UVandana Shiva, Andrew Kimbrell, Ronnie Cummins, Sierra Club, Greenpeace, Institute for Agriculture and Trade Policy, incwadi kaMichael Pollan ethi “In Defense of Ukudla, ”ama-movie athi“ Food, Inc ”ne-“ The World According to Monsanto, ”kanye“ nesihloko esinqamula kuzo zonke izindawo ezinobungozi ze-ag-biotech (ngaphandle kokuwela / ukungcola, izinyosi, izimvemvane, ukuphepha kwabantu, njll.) . ”
"Bonke laba bantu, izinhlangano, izinto zokuqukethwe nezindawo zezihloko zisho imali yezinkampani ezahlukahlukene ezithende kahle, uByrne wabhala, enezela:
Bonke laba bantu, izinhlangano, izinto zokuqukethwe nezindawo zezihloko zisho imali yezinhlangano zezinkampani ezithende kahle.
“Ngikholwa wukuthi mina noVal singakhomba futhi sisebenze njengezimoto ezifanele (ezingezona ezemfundo) esingaxhuma ngazo lezi zinhlaka nomsebenzi ngephrojekthi ngendlela esiza ukuqinisekisa ukuthembeka nokuzimela (futhi ngaleyo ndlela kube nenani) labanikeli abakhulu / abanikazi… Ngikholwa ukuthi ikhabethe lethu lekhishi lapha lingasebenza njengabagcini bamasango (kwezinye izimo abathathi ntela) ukuze kutholakale izimpendulo ezisebenzayo, ezithembekile, ukugoma kanye nokwenza imisebenzi ngokusebenzisa leplatifomu yephrojekthi… ”
"Kuzwakala kukuhle kimi," kuphendula uChassy. “Nginesiqiniseko sokuthi uzongitshela ukuthi nixoxa ngani.”
Ku-an ukushintshana nge-imeyili noChassy yangomhla kaNovemba 30, 2010, u-Eric Sachs, ophethe ezobudlelwano nomphakathi eMonsanto, waxoxa ngokuthola ukwesekwa kwebhizinisi kwe-Academics Review ngenkathi "egcina iMonsanto ingemuva."
USachs ubhalele uChassy:
"Mina nawe sidinga ukukhuluma kabanzi ngesayithi kanye nomqondo" wokubuyekezwa kwezifundiswa ". Ngikholwa wukuthi kunendlela eya enqubweni ebingaphendula kangcono ekukhathazekeni nasezinsolweni zesayensi. Ngihlanganyele noVal izolo. Ngokombono wami inkinga ingenye yokubandakanyeka kochwepheshe futhi engaxazululwa ngokukhokha ochwepheshe ukuze banikeze izimpendulo. Mina nawe sixoxe ngalokhu esikhathini esedlule. UVal uchaze ukuthi igxathu lokuqala lisungula isimo esingu-501 (c) sesi-3 sokungenzi nzuzo ukwenza lula ukuqoqwa kwemali. Lokho kunengqondo kepha kukhona okuningi. Ngixoxile noJerry Steiner namuhla (Ithimba Elilawulayo leMonsanto) futhi ngingasiza ukukhuthaza i-CLI / BIO / CBI nezinye izinhlangano ukuthi zisekele. Ukhiye kuzoba ukugcina iMonsanto ingemuva ukuze ingalimazi ukwethembeka kolwazi. ”
Ukhiye uzobe ugcina iMonsanto ngemuva ukuze ingalimazi ukwethembeka kolwazi.
I-CLI / BIO / CBI ibhekisa emaqenjini amathathu okuhweba embonini - iCrop Life International, iBiotechnology Innovation Organisation kanye noMkhandlu Wezokwazisa ngeBiotechnology Information - amele izinhlangano zezolimo.
UChassy uphendule uSachs, “Yebo kufanele sikhulume nge-Academics Review. Ngicabanga ukuthi sisesigabeni esisodwa. ”
Lapho ebuzwa ngqo ngezimali, uChassy uphendule nge-imeyili wathi: “Ukubuyekezwa kwezifundiswa akuceli noma kwamukele izimali kunoma yimuphi umthombo wocwaningo oluthile noma eminye imisebenzi ehambisana nanoma yimiphi imikhiqizo, izinsizakalo noma imboni. Ukubuyekezwa kwe-Academics kwamukela kuphela iminikelo engavinjelwe evela emithonjeni engekho yezinkampani ukusekela umsebenzi wethu. ”
Uthe ukubuyekeza kwe-Academics kwahlanganisa futhi kwabikwa ukuthi akukho mali engenayo ngo-2012 futhi wahlinzeka ngama-IRS form 990s for 2013 futhi 2014 (manje nayo ithunyelwe kuwebhusayithi). Leyo mibhalo ibika u- $ 419,830 kumali engenayo kepha ayifaki lwazi ngabanikeli. UChassy akazange aphendule ezicelweni zokunikeza lolo lwazi.
Cindezela Amakhava Ukuhlasela "Okuzimele" ku-Organic
I-Academics Review yakhipha ucwaningo lwayo lwezinto eziphilayo ngo-Ephreli 2014 kumjikelezo oqinile wokushicilelwa kwabezindaba ochaza okutholwe "ngabaphenyi abazimele":
“Imboni Yokudla Engokwemvelo Ike Yabandakanyeka Embikweni Wokufaka Izimangalo 'Wezinkulungwane Eziningi Zomphakathi Wokukhishwa Kolwazi' (I-Navigator Yokudla)
• “Umbiko: Imboni Engokwemvelo Ithole Iminyaka Engama-25 Yokukhula Ngokushesha Ngokusebenzisa Ukwesaba Nokukhohlisa”Izindaba Zokuphepha Kokudla)
• “Icala Elibi Lokumakethwa Kokudla Okuphilayo” (I-Dairyma kaHoardn)
• "Ukusebenzisa Ukwesaba Njengecebo Lokuthengisa" (Izindaba Zebhizinisi Lokudla)
In the New York Post, UNaomi Schaffer Riley wakha icala elibhekene "nobushiqela be-organic mommy mafia" abakhohliswa amaqhinga wokumaketha angenabungozi embonini yezinto eziphilayo. Imithombo yakhe ibandakanya umbiko we-Academics Review noJulie Gunlock, umbhali wencwadi ekhuluma “ngesiko lokwesaba.”
URiley akazange asho ukuthi uGunlock, kanye noRiley uqobo, bobabili abadala abafo e-Independent Women Forum, iqembu uxhaswa kakhulu yi-Donors Trust, enayo ukuhlaselwa kwezinkampani okubhange ezinyunyaneni, ezikoleni zomphakathi kanye nososayensi bezulu.
In the I-Register ye-Des Moines, UJohn R. Block, owayengunobhala wezoLimo e-US manje osebenzela inkampani yabameli enxenxa izintshisekelo zebhizinisi lezolimo, ubike “ngombiko we-blockbuster” we-Academics Review nemiphumela yayo yokuthi imfihlo yemboni yezimboni eyimpumelelo “ukumaketha kwabantu abamnyama. ”
The iqembu langaphambili lebhizinisi I-American Council on Science and Health, okuyi ithola uxhaso kusuka embonini yezolimo nalapho uChassy esebenza khona njengomeluleki wesayensi, ehlohla isihloko esithi "abamnyama abamaketha" kuma-athikili ngumongameli we-ACSH Hank campbell futhi UHenry I. Miller, MD, uzakwabo waseHoover Institute obesebenza njengesikhulumi ezikhangisweni ngomzamo wokubulala ilebula le-GMO eCalifornia, okwakunguMonsanto ohola imali.
Miller, onomlando omude wokwenza izimangalo zesayensi ezinganembile ukusekela izintshisekelo zebhizinisi, kusetshenziswe nombiko wokubuyekezwa kwezifundo njengomthombo wokuhlaselwa okungokwemvelo ku Newsweek futhi Buyekeza National, futhi wafuna ku Wall Street Journal ukuthi ukulima ngokwemvelo akusimeme.
Izindikimba ezifanayo zokulwa nemvelo zidlula kwezinye iziteshi ze-PR zezimboni zezolimo.
Izimpendulo ze-GMO, a iwebhusayithi yezokumaketha uxhaswe yizinkampani zeBig Six ze-agrichemical (futhi kuphi Chassy futhi Tribe zisebenza "njengochwepheshe abazimele"), zithuthukisa imibono yokuthi iyini imvelo akunampilo, akukho okungcono ngemvelo futhi uhlelo lokumaketha nje - yize, ngokumangazayo, inkampani ye-PR eqhuba i-GMO Answers yethule iqembu elikhethekile eSan Francisco ukuzama imali emakethe yemvelo.
Isikhulumi esiphezulu seMonsanto, URobb Fraley, futhi ngokuphindaphindiwe ukudanisa the eziphilayo umkhakha on wakhe Twitter feed.
Ukuhamba Kwemali Kuya Esidlangalaleni; Ukubuyekezwa Kwezifundiswa Kuthula
NgoMashi 2016, kubika uMonica Eng yeWBEZ kumadokhumende akhombisa ukuthi iMonsanto ikhokhele uSolwazi Bruce Chassy imali engaphezu kwama- $ 57,000 esikhathini esiyizinyanga ezingama-23 ukuhamba, ukubhala nokukhuluma ngamaGMO - imali engazange ivezelwe umphakathi.
Ngokophenyo luka-Eng, le mali ibiyingxenye okungenani yama- $ 5.1 million emalini engadalulwanga iMonsanto ethunyelwe nge-University of Illinois Foundation kubasebenzi baseyunivesithi nasezinhlelweni phakathi kuka-2005 no-2015.
"UChassy akazange adalule ubudlelwano bakhe bezezimali neMonsanto kumafomu wombuso noma eyunivesithi okuhloswe ngawo ukuthola ukungqubuzana kwezintshisekelo," kubika i-Eng.
“Imibhalo iqhubeka ikhombisa ukuthi uChassy kanye nenyuvesi bayalele iMonsanto ukuthi ifake leyo mali kwi-University of Illinois Foundation, okuwumgwamanda onamarekhodi avikelwe ekuhlolweni komphakathi. Isisekelo futhi sinamandla okuthatha imali yangasese bese siyikhiphela kumuntu 'njengeyunivesithi ekhokhelwayo' - engadalulwanga. ”
NgoJanuwari 2016, uCarey Gillam, umqondisi wezocwaningo wase-US Right to Know, kubikwe ngama-imeyili okukhombisa ukuthi amakhulu ezinkulungwane zamadola asegeleze esuka eMonsanto aya eNyuvesi yase-Illinois “njengoba uChassy ebambisene kumaphrojekthi amaningi neMonsanto ukulwisana nokukhathazeka komphakathi ngezitshalo ezishintshwe izakhi zofuzo (GMOs) - konke lokhu ngesikhathi ezimele njengesifundiswa esizimele sesikhungo somphakathi. ”
"Okutholayo lapho ufunda ngamaketanga e-imeyili amalungiselelo avumela abadlali bemboni ukuthi bahlanganise imiyalezo ye-pro-GMO ngaphakathi kweveli lobuchwepheshe obuzimele, futhi okuncane, uma kukhona, ukudalulwa esidlangalaleni kokuxhumana okwenzeka ngemuva," kubhala uGillam .
The okuthunyelwe kokugcina esizeni Sokubukeza Izifundo, sangomhla ka-Septhemba 2, 2015, yibhulogi kaChassy echaza ukuthi amanye ama-imeyili akhe azokwaziswa umphakathi ngenxa yezicelo ze-FOIA ze-US Right to Know, azibonakalisa njengokuhlaselwa eminyakeni engama-40 isayensi yomphakathi, ucwaningo nokufundisa.
Ukwesekwa kwezezimali okuvela emkhakheni ozimele ocwaningweni lomkhakha kahulumeni kanye nokufinyelela kubantu “kufanelekile, kuvamile futhi kuyadingeka ukufeza izidingo zomphakathi,” kubhala uChassy. "Ukwesekwa okunjalo kufanele, futhi kukho konke engikubonile, kube sobala futhi kwenziwe ngaphansi kweziqondiso zokuziphatha eziqinile zezikhungo zikahulumeni ezisizakala emikhakheni ezimele noma eminikelweni yomuntu ngamunye yezezimali."
Ezinsukwini ezintathu kamuva, amanye ama-imeyili kaChassy aqala ukwenziwa obala ekhasini lokuqala New York Times i-athikili yomlobi wezindaba ophumelele amahlandla amabili wePulitzer Prize u-Eric Lipton. ULipton ubike ukuthi uMonsanto wanikeza uChassy isibonelelo semali engadalulwanga ngo-2011 “yokwenza imisebenzi ye-biotechnology nemisebenzi yezemfundo.”
UChassy utshele uLipton ukuthi imali ayithola kuMonsanto "isize ekukhuphuleni izwi lakhe ngokuhamba, iwebhusayithi ayenzile nezinye izindlela."
Usathola I-Press njengoMthombo Ozimele
Ngaphandle kokudalulwa kuma-imeyili nokudalulwa kwezibopho zezezimali zikaChassy eMonsanto, iwebhusayithi ye-Academics Review kanye nombiko wayo ohlasela imboni yezinto eziphilayo kusathunyelwe ku-inthanethi nazo zonke izincazelo ezithi zizimele.
Futhi uChassy usakujabulela ukusakazwa ngabezindaba njengochwepheshe "ozimele" kuma-GMO. NgoMeyi 2016, babili abahlukene Associated Press izindaba ucaphune uChassy ngaleso sihloko. Ayikho le ndaba eye yakhuluma ngokuxhumana kwezezimali kukaChassy nomphakathi manje neMonsanto.
UStacy Malkan ungomunye wabaphathi beqembu labathengi i-US Right to Know. Ungumbhali wencwadi ethole umklomelo, “Hhayi Ubuso nje Obuhle: I-Ugly Side ye-Beauty Industry” (New Society 2007).
I-GMO, Uphenyo lwethu Ukubuyekezwa Kwezifundiswa, ActivistCash.com, Umkhandlu waseMelika weSayensi nezeMpilo, Bio, Inhlangano ye-Biotechnology Innovation, UBruce Chassy, I-CBI, Isikhungo Senkululeko Yabathengi, CLI, Umkhandlu Wezokwaziswa Kwe-Biotechnology, Izitshalo Zokuphila Zomhlaba Wonke, UDavid Tribe, Abaxhasi Trust, U-Eric Sachs, Izimpendulo ze-GMO, Hank campbell, Henry Miller, Isikhungo seHoover, Inkundla Yabesifazane Ezimele, UJay Byrne, UJerry Steiner, UJohn R. Block, UJulie Gunlock, Monsanto, UNaomi Schaffer Riley, ukuhlaselwa okuphilayo, ukudla okwenziwe ngezinto eziphilayo, URick Berman, URobb Fraley, University of Illinois, Inyuvesi yase-Illinois Foundation, University of Melbourne, I-Val Giddings
Kungani iCornell University Ibamba Umkhankaso We-GMO Propaganda?
Posted on January 22, 2016 by UStacy Malkan
Ukumela isayensi - noma inkulumo-ze?
Lo mbhalo ka-Stacy Malkan wasekuqaleni uvele ku- Isazi sezinto eziphilayo
Abasunguli beCornell University, u-Andrew D. White no-Ezra Cornell, baphupha ngokwakha inyuvesi enkulu ethatha indlela ebucayi yokufunda. Umoya wabo wenguquko, nesithembiso sokuphishekela ulwazi ngokuzuzisa okukhulu, ngu wathi enhliziyweni yesikole i-Ivy League iphupho labo laba.
Kunzima ukuqonda ukuthi le mibono isetshenziswa kanjani yiyunithi yaseCornell esebenza njengengalo yezobudlelwano bomphakathi embonini yezolimo.
Nokho yilokho okubonakala kuqhubeka eCornell Alliance for Science (CAS), uhlelo umkhankaso ngo-2014 ngesibonelelo sika- $ 5.6 million esivela ku-Bill & Melinda Gates Foundation kanye nomgomo “wokudicilela phansi inkulumo-mpikiswano ekhokhisiwe” mayelana nama-GMO.
Ukubuyekezwa kwezinto zokwenziwa nezinhlelo zeqembu kusikisela ukuthi ngaphansi kwesithembiso salo “sokubuyisa ukubaluleka kobufakazi besayensi ekuthathweni kwezinqumo,” i-CAS ithuthukisa ama-GMO isebenzisa imiyalezo engathembekile namasu we-PR akhiwa izinkampani zezolimo ezinomlando omude wokudukisa umphakathi ngesayensi .
Ukuxhumana nesayensi noma inkulumo-ze?
I-CAS umkhankaso wezokuxhumana ozinikele ekukhuthazeni ukudla okwenziwe ngezakhi zofuzo (okwaziwa nangokuthi ama-GMO) emhlabeni jikelele. Lokhu kucaciswa kweqembu ividiyo yephromoshini.
Umqondisi we-CAS USarah Evanega, PhD, uchaza iqembu lakhe "njengenhlangano engenzi nzuzo yezokuxhumana emelwe ososayensi, abalimi, ama-NGO, izintatheli kanye nezakhamizi ezikhathazekile" ezizosebenzisa "amapulatifomu asebenzisanayo e-inthanethi, izinsizakusebenza zemultimedia nezinhlelo zokuqeqesha ezokuxhumana ukwakha inhlangano yomhlaba wonke yokukhuthaza ukufinyelela kwi-biotechnology . ”
Ngale ndlela, bathi bazosiza ekunciphiseni ukungondleki nendlala emazweni asathuthuka, ngokusho kwevidiyo.
UDkt Evanega uthe iqembu lakhe alinakho ukuxhumana nezimboni futhi alitholi izinsiza ezivela embonini. "Asibhaleli izimboni, futhi asikhuthazi noma siphakamise imikhiqizo ephethwe yimboni," ubhale kanje iposi blog enesihloko esithi “Ilungelo Lokwaziwa (Ngokunembile) lapho ebephindisela khona emuva ekugxekeni eqenjini lami, i-US Right to Know.
Noma kunjalo izinhlelo ezihamba phambili ze-CAS - isifundo samasonto ayi-12 se- Abaholi Bomhlaba Wonke Bobuholi kanye nezinsuku ezimbili izifundo zokuxhumana - fundisa amakhono okuxhumana nabantu "abazibophezele ekukhuthazeni ukufinyelela okwandisiwe kwe-biotechnology" ikakhulukazi ukuze bakwazi "ukuhola imizamo yokukhuthaza ezimeni zabo zendawo."
Leli qembu futhi linokusebenzisana okungajwayelekile nezintatheli. Kusho ukuthini, njengoba ividiyo ye-CAS isho, ukuthi "imelwe" yizintatheli?
Ukunikezwa kwe-CAS ubudlelwane bobuntathelis ngemiklomelo yemali yezintatheli ezikhethiwe ukuze “zithuthukise ukubika okunemibandela ejulile” mayelana nezinkinga eziphathelene nokuvikeleka kokudla, ukukhiqizwa kwezitshalo, ubuchwepheshe be-biotechnology kanye nezolimo ezisimeme.
Ngabe lezi zintatheli nazo zingabameli beGMO? Kulungile kanjani ukuthi izintatheli zimelele izikhundla zenqubomgomo yeqembu elisekela ezolimo nemboni?
Imilayezo yezintshisekelo zebhizinisi
Into eyodwa icacile emyalezweni we-CAS otholakala esidlangalaleni: umongo abawunikeza ngesihloko sokudla okwenziwe ngezakhi zofuzo awunabunzulu futhi ubanzi kepha ukhetha kakhulu futhi uhlose ukuqhubekisela phambili izintshisekelo zomkhakha wezolimo.
Isibonelo, ividiyo: Egcwele ithemba ngamathuba ama-GMO wokuxazulula indlala emhlabeni ngokuzayo, ayishayi indiva inqwaba yocwaningo lwezesayensi olubhale izinkinga ezihlobene nama-GMO - izitshalo ze-GMO ezibekezelela ukhula kuqhutshwa phezulu ukusetshenziswa kwe-glyphosate, i-herbicide kuxhumene nomdlavuza ngochwepheshe abaphambili bomdlavuza emhlabeni; futhi yashesha ukumelana nokhula ezigidini zamahektare asepulazini lase-US, elenza ukukhiqizwa kwezitshalo kube nzima kubalimi, kungabi lula.
Akukho lapho kushiwo khona ukwehluleka kwezitshalo ze-GMO ezenzelwe gwema izinambuzane eziyingozi, noma ukukhathazeka okukhulayo kodokotela bamaphethini ngokugula ezindaweni ezinjenge Hawaii futhi Argentina lapho ukuvezwa kusinda kakhulu kumakhemikhali ahambisana nama-GMO.
Akukho ukuqashelwa ukuthi abaningi ososayensi futhi ukudla abaholi bathe ama-GMO awabalulekile ekuphakeleni umhlaba, impikiswano okuyisona sizathu esenza izitshalo ze-GMO zingamukelwa kabanzi ngaphandle kwase-United States naseLatin America.
Zonke lezi zinto zifanele engxoxweni yokuthi amazwe asathuthuka kufanele yini amukele izitshalo nokudla okwenziwe ngezakhi zofuzo. Kepha i-CAS ishiya eceleni le mininingwane futhi ikhulise umbono ongelona iqiniso wokuthi isayensi ixazululwe ekuphepheni nasekudingekeni kwama-GMO.
Ukusabalalisa imininingwane ekhethiwe yohlobo oluchemile noma oludukisayo ukuthuthukisa i-ajenda ethile kwaziwa njengomkhuba wenkulumo-ze.
Ukusebenza encwadini yokudlala ye-PR yomkhakha
ICornell Alliance for Science bekufanele samanje “Umbono omusha wezokuxhumana kwe-biotechnology,” kepha iqembu lithembele kusethi yemilayezo namasu wokuxhumana ajwayelekile kunoma ngubani olandela imikhankaso ye-PR embonini yamabhizinisi ezolimo.
Umbiko Ukuphalaza ukudla, engibhalile ngokubambisana noKari Hamerschlag no-Anna Lappé, ibhala ukuthi amaqembu axhaswa ngezimboni zezolimo nezimboni asebenzisa kanjani amashumi ezigidi zamaRandi ngonyaka ukukhuthaza imiyalezo edukisayo maqondana nokuphepha kanye nesidingo sezolimo esisebenza ngezimboni, esisebenza ngamakhemikhali, nofuzo.
Izinkampani ezizuza kakhulu kulolu hlelo - iMonsanto, iDow, iDuPont nezinye iziqhwaga zezolimo - ziphambanise kaningi ukuthembela ngokudukisa umphakathi ngesayensi, njengoba uGary Ruskin akhombisile embikweni wakhe Ibhizinisi Lokusiza. Ngakho bathembele amaqembu angaphambili futhi ababambisene nabangaphandle njengososayensi noprofesa ukusabalalisa imiyalezo yabo.
Indaba esemqoka embonini ukuthi isayensi yezokuphepha kwe-GMO ixazululiwe. Izithunywa ze-pro-industry zigxila ekusetshenzisweni kobuchwepheshe esikhathini esizayo ngenkathi zilulaza, zinganaki noma ziphika ubungozi; yenza izimangalo ezinganembile mayelana nezinga lesivumelwano sesayensi kuma-GMO; futhi bahlasele abagxeki abaphakamisa ukukhathazeka njenge- "anti-science."
Njengesibonelo esisodwa, uMark Lynas, umqondisi wezepolitiki we-CAS, wabhala i-New York Times i-op-ed esola amazwe ayi-17 e-European Union avimbela ukutshalwa kwezitshalo ze-GMO ngokuthi “kuphendulwa isayensi.” Wababiza ngokuthi “umfelandawonye wabangazi.”
I-athikili inzima ekuhlaselweni nasekukhanyeni kwesayensi, ibhulasha phezu kwesihloko ngesimangalo esingalungile mayelana nokuvumelana kokuphepha okuthi ososayensi abaningi baphikisile.
Njengesazi sezakhi zofuzo uBelinda Martineau, PhD, wabhala ku impendulo kuLynas, "Ukwenza izimangalo ngokujwayelekile mayelana nokuphepha kobunjiniyela bezakhi zofuzo… (akukhona) ngokwesayensi, akunangqondo futhi akunangqondo."
I-World Health Organization uthi, "Akunakwenzeka ukwenza izitatimende ezijwayelekile mayelana nokuphepha kwakho konke ukudla okuphathelene ne-GM."
Kodwa-ke, ngenkathi bethi bayimele isayensi, i-CAS ijwayele ukwenza izimangalo ngokujwayelekile - nokungajwayelekile - mayelana nokuphepha kwe-GMO.
Kusuka kweqembu Imibuzo Evame Ukubuzwa:
"Kungenzeka ukuthi ushayiswe yi-asteroid kunokulimazwa ukudla kwe-GE - futhi lokho akulona ihaba."
“Izilimo ze-GE ezitholakalela umphakathi njengamanje azinabungozi obukhulu kwezempilo noma ukukhathazeka ngezemvelo kunezinye zazo ezingezona izakhi. Lona akuwona umbono wami. ”
Ukulwa nokuba sobala kwezesayensi
Ngentwasahlobo ka-2014, i-CAS yethule i- isikhalazo ngihlasela iqembu lami lase-US Ilungelo Lokwazi ngokufaka izicelo ze-Freedom of Information Act (FOIA) zokuthola ama-imeyili oprofesa abakhokhelwa nguhulumeni njengengxenye yethu uphenyo ezimbonini zokudla nezolimo kanye nemisebenzi yabo ye-PR.
I-CAS ibize i-FOIA ukuthi icele "ukuzingelwa kwabathakathi," kepha imibhalo etholwe ngalezi zicelo ze-FOIA iveze izindaba ezindabeni emithonjeni yezindaba ephezulu emayelana nezifundiswa ezazisebenza nezinhlangano zezimboni ze-PR emikhankasweni yokukhuthaza ama-GMO ngaphandle kokudalula lezo zibopho emphakathini.
Indaba yagqashuka ekhasini lokuqala leNew York Times esihlokweni ngu-Eric Lipton owaphumelela kabili umklomelo wePulitzer Prize, owachaza ukuthi iMonsanto, lapho ibhekene nokungaqiniseki kwabathengi ngama-GMO, “ibuyise kabusha isu labo lokunxenxa nobudlelwano bomphakathi ukuze kubonakale iqembu labameli abangavamile: izifundiswa, ezilethwe ekukhanyeni okungakhethi kanye nesisindo segunya eza nozalo loprofesa. ”
Kokunye, kubika nguLaura Krantz eBoston Globe, isikhulu seMonsanto sitshele uprofesa waseHarvard uCalestous Juma ukuthi abhale iphepha mayelana nokuthi adingeka kanjani ama-GMO ukondla i-Afrika.
“IMonsanto ayigcinanga nje ngokusikisela lesi sihloko kusolwazi uCalestous Juma. Kufike lapho kuze kwanikezwa isifinyezo sokuthi iphepha lingathini kanye nesihloko esiphakanyisiwe. Le nkampani bese ixhuma lo profesa nenkampani yezokumaketha ukuyipompa nge-Internet njengengxenye yecebo likaMonsanto lokunqoba umphakathi nabomthetho, ”kubhala uKrantz.
UJuma uthe akayithathanga mali eMonsanto kodwa uqaphele ukuthi uthole uxhaso kwiGates Foundation, ebibambisene neMonsanto iminyaka eminingi kumaphrojekthi we-GMO ngemuva URob Horsch, Isikhulu esiphezulu seMonsanto ekuthuthukisweni kwamazwe omhlaba, wajoyina iSisekelo ngo-2006. IHorsch manje kuhola Ithimba lezocwaningo nezentuthuko zikaGates. (A Ukuhlaziywa kwe-2014 yiqembu locwaningo iGrain lithole ukuthi cishe ama-90% ama- $ 3 billion iGates Foundation ayisebenzisile ukondla abampofu e-Afrika waya ezizweni ezicebile, ikakhulukazi amanyuvesi nezikhungo zocwaningo.)
Umphakathi unelungelo lokwazi ukuthi ngabe izifundiswa ezenza imithombo ezimele zisebenza ngasese nezinkampani kanye namafemu abo e-PR emikhankasweni yemiyalezo ehlanganisiwe ukuze baqhube i-ajenda yenkampani.
I-CAS ithatha isikhundla esicelweni sayo sokuthi umphakathi awunalo ilungelo lokwazi ngobudlelwano obuphakathi kwabasebenzi bezimboni ze-PR nososayensi bomphakathi abayi-14 "abafake isandla ekuvumelaneni kwesayensi mayelana nokuphepha kwama-GMO."
Isicelo sikaCornell sihambisana nemontage yezithombe equkethe uCarl Sagan, Madame Curie, Albert Einstein nabanye ososayensi abangasekho abangasayinisanga isicelo, bagxivizwa ngesiqubulo esithi, “Ngima ne- # Science14” - okuncane okukhangayo kwe-PR okubukisa i inkulumo-ze yokungathembeki kujwayele ukuphikisana nokulebula kwe-GMO.
Ukuqondanisa nabalobi bezimboni ze-PR
Esikhungweni esihlonishwayo njengoCornell, ungalindela ukuthola ochwepheshe kwizifundo zesayensi noma zokuziphatha ezifundisa izifundo zokuxhumana ezithembisa ukubuyisa ubuqotho besayensi enkulumweni yomphakathi. Esikhundleni salokho, ku-CAS, uzothola ochwepheshe kwezokuxhumana kwezinhlekelele abagxile ekuphikiseni imithetho yezempilo yomphakathi.
Isibonelo, uTrevor Butterworth, umuntu ovakashele eCornell kanye nomqondisi weSense About Science ("inhlangano engathathi hlangothi, engenzi nzuzo ekhuthaza ukuqonda ngesayensi!") ukubambisana nge-CAS ukufundisa abafundi nososayensi ukuthi bangaxhumana kanjani nezintatheli mayelana nama-GMO.
IButterworth inomlando omude wokuxhumana nesayensi ukuze kuhlomule izinkampani ezifisa ukugcina imikhiqizo yazo ingalawulwa. I-Milwaukee Journal Sentinel ka-2009 esihlokweni nguMeg Kissinger noSusanne Rust mayelana nemizamo yokunxenxa izimboni kwi-bisphenol A (BPA) emkhombe "njengombhali wezobudlelwano embonini yamakhemikhali."
Njengomhleli we-STATS eGeorge Mason University, uButterworth wayengumvikeli omkhulu we-BPA "ohlanganisa njalo i-Intanethi ezindabeni ze-BPA futhi anikeze imibono ngaphandle kokuveza obudlelwano bakhe nezimboni," kubhala uKissinger noRust.
“I-STATS ithi izimele futhi ayithathi hlangothi. Kepha ukubuyekezwa kwemibiko yayo yezezimali kukhombisa ukuthi igatsha leCentre for Media and Public Affairs. Leli qembu lakhokhelwa imboni kagwayi ukuze liqaphe izindaba ezithinta ubungozi bukagwayi. ” (Imboni kagwayi, baphawula ukuthi, yayinxenxa nemboni yamakhemikhali ukugcina i-BPA ingalawulwa.)
IButterworth iphinde yathuthukisa nezikhundla ezimbonini eziphikisana nemithetho ye-vinyl plastic kanye phthalates, ukukhwabanisa, i-fructose ephezulu isiraphu yengqolowa futhi ama-sodas anoshukela.
Manje usebenzisana neCAS ukufundisa abafundi indlela yokuxhumana ngama-GMO, kanti umqondisi wezepolitiki we-CAS uLynas uhlala ebhodini lezeluleko leSense About Science.
Umsebenzi kaLynas uphakamisa imibuzo eminingi: Kungani iqembu lesayensi lidinga umqondisi wezepolitiki? Futhi kungani iCAS ikhetha uLynas ngendima? ULynas akayena usosayensi kepha ungumbhali wezemvelo owasukuma udumo olungazelelwe ngemuva kokwamukela ama-GMO, futhi isayensi yakhe iye yagxilwa isikhathi eside ngu ososayensi, Izintatheli futhi oprofesa.
Ukwehlisa impikiswano ye-GMO?
Izinkampani zaziwa ngokusabalalisa imiyalezo ethusayo lapho imikhiqizo yazo ingena enkingeni; izibonelo kufaka phakathi i- "DDT ilungele mina," "Odokotela abaningi bayabhema amaKamela" kanye nomkhankaso weDutch Boy wokukhuthaza upende wokuhola ezinganeni.
Iphuzu eliphansi lokuthumela imiyalezo embonini yamakhemikhali bekungokwalo Umkhankaso we-PR ukudweba umbhali “weSilent Spring” uRachel Carson (kanye nezazi zemvelo ngokujwayelekile) njengababulali bezigidi zezingane e-Afrika ngokuveza ukukhathazeka nge-DDT.
Lolo hlobo lwemiyalezo lubuyela emuva empikiswaneni ye-GMO.
NgoSepthemba 2015, i-CAS Speakers Series yabamba u-Owen Paterson, iLungu lePhalamende lase-UK, ngo-a inkulumo enesihloko esithi, “Bheka Ilungelo Lakho Eliluhlaza: Akusona Isimo Sezulu Ukuvumela Izigidi Zife.”
EzikaPaterson inkulumo kwagcwala izimangalo ze-hyperbolic mayelana nama-GMO angenakho ukuqina kwesayensi (ama-GMOs) empeleni iphephe kunezilimo ezijwayelwe ... enye yezintuthuko ezigcina imvelo emhlabeni ingakaze ibonwe… kungasindisa izimpilo eziyizigidi ezisaphazwa namuhla yimibono yamaqembu omkhankaso wezemvelo asekelwa kakhulu. ”)
Le nkulumo ithole indumiso evela ku- Umkhandlu waseMelika weSayensi nezeMpilo, iqembu eliphambili lezimboni, ku blog nguDkt. Gil Ross onesihloko esithi, "Imikhankaso Eluhlaza Yezigidigidi Eziyizigidi Ezimbili Ibulala Izingane Ezimpofu."
URoss uchaze kubhulogi ukuthi iCAS Speakers Series yadalwa, “ukusebenzisa amaqiniso ukumelana nokuthambekela okubonakalayo kwabafundi basekolishi ukulandela imantra yezemvelo ngaphandle kokucabanga kakhulu… umqondo wokwesaba ubunjiniyela bezakhi zofuzo ufana nokubheka ngaphansi kombhede ngenxa yama-hobgoblins afana no-Godzilla, avuswa ukuhlolwa kwe-athomu kwempi yomshoshaphansi. ”
UPaterson noRoss abasizi ngomfanekiso wobuqotho besayensi i-CAS izama ukuveza lokho. URoss uyisigebengu esilahlwe yicala esachitha isikhathi ejele ngokukhwabanisa kweMedicaid. UPaterson, owayengunobhala wezemvelo e-UK, ubonakala kabanzi njenge- ukuguquguquka kwesimo sezulu kuyabazeka imibono kabani akuhambisani nesayensi.
Ngabe ama-blogger aseHawaii asiza kanjani ukondla abampofu e-Afrika?
Ngenkathi yokukhula konyaka, iziQhingi zaseHawaii ziyindawo ebalulekile yokuhlola ama-GMO. Futhi ayiziro yomhlabathi ye- ukukhathazeka mayelana nezibulala-zinambuzane ezihlotshaniswa nama-GMO, kanye nokugxila okuyinhloko kwemikhankaso yenkulumo-ze ye-pro-GMO yomkhakha nabalingani bayo njenge-CAS.
Elif Bealle, umqondisi omkhulu we IHawaii Alliance Yezenzo Eziqhubekayo, ubesebenza emizamweni engaphansi ye ukubikwa kwezibulala-zinambuzane, banns futhi izindawo zokubulala izibulala-zinambuzane cishe izitshalo ze-GMO. Ubuye futhi wabheka i-CAS, athe ibilanda ama-blogger endawo futhi inabalingani eziQhingini eziningana.
“Baziveza 'njengezakhamuzi zendawo ezikhathazekile' noma 'njengezintatheli ezingathathi hlangothi.' Cishe basebenza isikhathi esigcwele bephawula ngama-athikili ephephandaba aku-inthanethi, bethumela, i-Community Voice Op-Eds, njll. Okuthunyelwe kwabo kubhulogi kuthathwa njalo kusatshalaliswe yiwebhusayithi yeqembu lebhizinisi le-biotech eHawaii, iHawaii Crop Improvement Association, ”kusho uBealle.
Isibonelo, uJoni Kamiya, i-CAS Umfo Wobuholi Emhlabeni Wonke, usebenzisa blog yakhe, Indodakazi kaMlimi waseHawaii, ukugqugquzela “ukuphepha nesayensi” yama-GMO ngemiyalezo ecwebezela isayensi futhi ehlazisa abagxeki be-GMO.
UKamiya futhi "uchwepheshe ozimele" we-GMO Answers, a GMO PR iwebhusayithi eyenziwe yinkampani yeKetchum PR futhi ixhaswe yizinkampani zezolimo. Izindatshana zakhe zibhalwe ku KaJon Entine I-Genetic Literacy Project, nayo eyathwetshelwa ukushicilela amaphepha okuphakanyiswa kweGMO anikezwe abakwaMonsanto futhi abhalwa ngosolwazi.
Ukubhalwa kukaKamiya kuvela ekhasini lasekhaya le- IKauai Farming and Jobs Coalition, iqembu elinemali engaziwa elithi "limele abantu kanye nezinhlangano ezahlukahlukene emphakathini wethu" futhi lithuthukisa izindatshana zeMonsanto, i-Genetic Literacy Project kanye neminye imboni yokudla amaqembu angaphambili njengesikhungo senkululeko yabathengi.
Abanye ababambisene ne-CAS eziqhingini bahlanganisa uLorie Farrell, a Umlingani we-CAS obhalela izimpendulo ze-GMO futhi wasiza ukuxhumanisa ukuphikisana nokuvinjelwa kokulinywa kwe-GMO esiQhingini Esikhulu sabaFuyi baseHawaii nabaseRanchers United; noJoan Conrow, obonisana nabantu isivumelwano noCornell bese ebhala i- ibhulogi elibhekene IKauai Eclectic.
Imiyalezo yabo ilandela iphethini ejwayelekile: bathi ukuvumelana kwesayensi ngokuphepha kwe-GMO futhi bahlasela abantu abafuna ukubekwa obala nokuphepha njengabantu bangaphandle ababulala "umoya we-Aloha" weziQhingi.
Kuye esihlokweni, "The War on Genetically Modified Food Critics," uTufts uProfesa Timothy Wise uthatha abezindaba abenze iphutha ngokulahla amaqhinga embonini ye-PR futhi ngokungafanele abike isayensi ku-GMO "njengelungisiwe."
"Esikubonayo wumkhankaso ohlangene wokuthi… kupendwe abagxeki be-GMO njengabaphikisana nesayensi ekubeni benganiki ngxoxo ebucayi ngempikiswano yesayensi esathukuthele," kubhala uWise.
Esinye isikhombisi salowo mkhankaso, uthe, kwakuwumnikelo weGates Foundation eya kuCornell ukuze "adicilele phansi" impikiswano ngokudla okuyi-GM.
"IGates Foundation ikhokhela ososayensi nabameli baseCornell ukubasiza bakholwe umphakathi ongenalwazi nongavunyelwe ingqondo, 'okungenzeka ukuthi abanolwazi olwanele,' ukuthi abanalwazi futhi badidekile engqondweni ... Kufana nokudicilela phansi isifuba ngokulwa nohlangothi olulodwa izikhali eziningi, ”kubhala uWise.
Esikhundleni sokuhlomisa izimpi ze-PR ngenhloso yokusebenzela imboni, iCornell University kufanele imele isayensi ngokubiza ingxoxo ethembekile ngama-GMO - evuma ubungozi kanye nezinzuzo zokudla okwenziwe ngezakhi zofuzo.
Lowo ogwema ukuhlasela futhi afune indawo esivumelana ngayo namaqembu afuna ukubekwa obala kanye namazinga ezempilo nezokuphepha.
Umqondisi we-CAS uDkt. Evanega uthe iqembu lakhe linamanani afanayo azungeze ilungelo lokwazi nokufinyelela olwazini, futhi uphikisana nombono wokuthi i-CAS yasungulwa ukukhuthaza ama-GMO.
“Lokho okubizwa ngokuthi 'ama-GMOs' akuyona into e-monolithic,” kubhala uDkt. Evanega kuye blog. “Isibonelo, akunangqondo ukuhlanganisa ndawonye ubuchwepheshe obuhlukahlukene njengamabhaktheriya akhiqizelwe ukukhiqiza i-insulin nopopo okwenzelwe ukumelana negciwane. Sisekela ukufinyelela - emisha kanye nolwazi oluzosiza abantu benze izinqumo ezizwakalayo ezisuselwa kwisayensi nobufakazi - hhayi ukwesaba, imizwa. ”
Impela ama-GMO akuyona into e-monolithic. Yingakho kungalungile futhi kungathembeki ukusho ukuthi abantu banamathuba amaningi okushaywa yi-asteroid kunokulimala ngama-GMO.
Ubumbano lwesayensi olumayelana nokubuyisa ubuqotho kwisayensi kufanele lukhanyise irekhodi eliphelele locwaningo, hhayi ukuphalaza amaphuzu okukhuluma amafemu e-PR nabadlali bezinkampani.
UStacy Malkan ungomunye wabasunguli nomqondisi-co weqembu labathengi I-US Ilungelo Lokwazi. Ungumbhali wencwadi ethi, “Not Just a Pretty Face: The Ugly Side of the Beauty Industry,” (New Society Publishing, 2007). UStacy wayeyintatheli futhi engummemezeli wephephandaba futhi esengummeli wesikhathi eside wezempilo yezemvelo. Ubuye wasungula iCampaign for Safe Cosmetics ngo-2002 wasebenza njengomqondisi wezokuxhumana kwi-Health Care Without Harm iminyaka eyisishiyagalombili.
Ukudla Okucatshangwayo, I-GMO, Uphenyo lwethu Umkhandlu waseMelika weSayensi nezeMpilo, Bill and Melinda Gates Foundation, Isikhungo Senkululeko Yabathengi, Isikhungo Sezindaba Nezindaba Zomphakathi, ICornell Alliance yeSayensi, Cornell University, Dow, Dupont, Iphrojekthi ye-genetic Literacy Project, UGeorge Mason University, UGil Ross, glyphosate, Izimpendulo ze-GMO, Indodakazi yoMlimi waseHawaii, Abalimi baseHawaii kanye namaRancher United, UJoan Conrow, UJon Entine, UJoni Kamiya, IKauai Eclectic, IKauai Farming and Jobs Coalition, UKetchum, ULorie Farrell, UMark Lynas, Monsanto, U-Owen Paterson, URob Horsch, USarah Evanega, Umuzwa Ngezesayensi, Isevisi Yokuhlola Izibalo, IZIBALO, UTrevor Butterworth
Isikhungo Senkululeko Yabathengi - amaqiniso asemqoka
Posted on January 12, 2015 by UGary Ruskin
* Yaqalwa ngonyaka we-1995 njenge-Guest Choice Network
* UPhillip Morris unikeze le nhlangano imali eyi- $ 600,000 ngemali yezimbewu
* Indawo yokudlela, izimali zenkampani kagwayi zasetshenziselwa ukulwa nokuvinjelwa kokubhema ezindaweni zokudlela
* Izindleko ezingaphezu kuka-40% ezihanjiselwe isitolo sokunxenxa uCenter for Consumer Freedom (CCF) uRick Berman
* Izinkokhelo eziya enkampanini yokubamba iqhaza eBerman ziholele iCharity Navigator ukuthumela ukwelulekwa kwabaxhasi ngeCCF
* ISIKHATHI: Ukuhlaselwa Kwenhlangano Yezabasebenzi "okushaya kancane"
Isikhungo Sokukhululeka Kwabathengi Ekuqaleni Sikhokhelwa Izimboni Zikagwayi Nezokudlela Ukulwa Nokuvinjelwa Kokubhema Ezitolo Zokudlela
Ngokusho the Washington Post, iCentre for Consumer Freedom - ngaleso sikhathi eyayibizwa ngokuthi iGuest Choice Network - ekuqaleni yayixhaswe ngemali “yenkampani kagwayi neyokudlela ukuze kuliwe nemingcele yokubhema ezindaweni zokudlela.”
The Thumela ibike ukuthi "uPhilip Morris USA Inc. wathembisa u- $ 600,000 - iningi lemali yembewu - eqenjini likaBerman ngo-1995. Inkampani yathi idinga umxhumanisi owayengumboni ophakathi nendawo '' futhi '' eqoqwe njengengxenye yenkantolo yamazwe amaningi emelene nezinkampani zikagwayi. ” [Washington Post, 4 / 27 / 05]
ISIKHATHI yabika ngo-2013 ukuthi leli qembu laxhaswa yimali evela kuPhilip Morris, futhi ladalelwa ukuthuthukisa “amalungelo ababhemayo” ezimbonini zokudlela nezokungenisa izihambi. [ISIKHATHI, 8 / 12 / 13]
Kusukela Izimpande Ezikhokhelwa Ugwayi, I-CCF Iselulekele Kwezinye Izindawo Ezithandekayo Zokuthakazelisa
Ngemuva kokushintshwa kwegama layo laba yiCentre for Consumer Freedom ngo-2001, iWashington Post yabika ukuthi “yagxila kakhulu ezindabeni zokudla neziphuzo, yaphakanyiswa ukukhathazeka ngokukhuluphala, isifo sezinkomo ezihlanyayo nemikhiqizo eguqulwe izakhi zofuzo.” [Washington Post, 4 / 27 / 05]
ISIKHATHI yabika ngo-2013 ukuthi i-CCF yandile ukukhuthaza ukusetshenziswa kwenyama, kanye nokuphikisana nobufakazi besayensi ngobungozi be-mercury ne-high fructose corn syrup. [ISIKHATHI, 8 / 12 / 13]
Izindleko ezingaphezu kuka-40% zeCCF zaya eBerman naseNkampanini kusukela ngo-2002-2012
Ithebula elingezansi lichaza izindleko eziphelele ze-CCF kanye nesinxephezelo esikhokhelwe yi-CCF kuBerman naseNkampani kusukela ngonyaka wentela ka-2002 kuya onyakeni wentela ka-2012.
Ngaleso sikhathi, ngaphezu kuka-40% wazo zonke izindleko zeCCF zaya eBerman naseNkampanini, kwathi kuleyo minyaka emihlanu (2002, 2007, 2008, 2010 nango-2011) imali engaphezu kwengxenye yezindleko zeCCF yaya eBerman naseNkampanini.
IntelaUnyaka UbudeIzindleko Isinxephezelo ku- UBerman neNkampani % Yezindleko eziya ku-UBerman neNkampani
2012 $ 1,024,582 $ 246,874 24.10%
2011 $ 2,121,780 $ 1,294,488 61.01%
2010 $ 2,640,780 $ 1,682,126 63.70%
2009 $ 8,831,659 $ 1,461,597 16.55%
2008 $ 1,594,299 $ 1,043,604 65.46%
2007 $ 1,951,753 $ 1,562,280 80.04%
2006 $ 3,291,050 $ 1,190,512 36.17%
2005 $ 3,818,769 $ 1,623,186 42.51%
2004 $ 3,246,452 $ 1,435,056 44.20%
2003 $ 2,752,519 $ 1,252,344 45.50%
2002 $ 1,970,803 $ 1,044,553 53.00%
TOTAL $ 33,244,446 $ 13,836,620 41.62%
[I-CCF IRS Form 990 filings]
Izinkokhelo ezeqile zeCCF eziya eBerman Led Charity Navigator Ukukhipha Iseluleko Sabanikeli
ICharity Navigator, umhloli wokuzimela omkhulu kunabo bonke waseMelika, njengamanje unoMeluleki Wabanikeli maqondana neCCF.
Ekwelulekeni, iCharity Navigator iveze ukuthi ukuhlaziywa kwabo kweFomu 2011 le-CCF lika-990 kwaveza ukuthi iningi lezindleko zeCCF zakhokhelwa iBerman kanye neNkampani, nokuthi “sithola umkhuba wenkontileka yokupha esiza izinsizakalo zokuphatha ngebhizinisi eliphethwe yilelo Isikhulu esiphezulu senkampani esiza abantulayo sisebenza kabi uma siqhathaniswa nezinye izinkampani ezisiza umphakathi ezisizayo. ” [Iseluleko sabanikeli beCharity Navigator]
Umlando Omude Wokwenza Ukuhlaselwa Kamanga Ngezinhlangano Ezihlonishwayo
ICentre for Consumer Freedom inomlando omude wokwenza ukuhlasela okungelona iqiniso nokungaqondakali kwezinhlangano ezihlonishwayo, kubandakanya iHumane Society, Mothers Against Drunk Driving kanye neTrout Unlimited.
UBerman uthi amaqembu anjalo "aneqembu elinodlame kuwo." [Washington Post, 4 / 27 / 05]
ISIKHATHI: Ukuhlaselwa Kwenhlangano Yezobuntu “Ukushaya Okuncane”
Ngo-Agasti 2013, ISIKHATHI ibike ngokuxhaswa kweCCF ngezikhangiso ezihlasela iHumane Society.
Lezi zikhangiso zithi yi-1% kuphela yemali engenayo yeNhlangano yoMphakathi eya ezindaweni zokukhosela zendawo, ukuhlaselwa ISIKHATHI ebizwa ngokuthi "ukushaywa okuphansi." [ISIKHATHI, 8 / 12 / 13]
Ukudla Okucatshangwayo, IHholo Lamahloni CCF, Isikhungo Senkululeko Yabathengi, Inethiwekhi Yokukhetha Izivakashi, UFilip Morris USA Inc., Phillip Morris, URick Berman